DHEGEYSO: Xisbiyada Sweden oo inta badan soo jeediyey in la kordhiyo mudada ay soconayso lacag loo qoray dadka u nugul Covid-19 | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: Xisbiyada Sweden oo inta badan soo jeediyey in la kordhiyo mudada...
(Stockholm) 28 Okt 2020 – Dhowr xisbi oo ku jira Baarlamanka dhexe ee Riksdag ayaa dalbanaya in la kordhiyo lacagta KMG ah ee loo qoray dadka loo yaqaan guruubyada halista ku jira (risk grup) haddii uu ku dhoco cudurka Cronavirus isla markaana aan guryaha kasoo shaqayn Karin.
Lacagtaas ayaa go’eysa dhamaadka sanadkan, balse waa in lasii wadaa inta ay Sweden ugu yaraan tallaal ka heleeyso, sida ay qabto Acko Ankarberg Johansson oo ah Afhayeenka Siyaasadda Bulshada ugu qaybsan Xisbiga KD
Dowladda Sweden, iyo xisbiyada CenterPartet iyo Liberalerna ayaa ballan qaaday in la samaynayo waqti kordhin gaaraysa muddo 180 cisho ah.
Ilaa iminka 2,400 oo qofood ayaa lacagtaas helay iyadoo ay lacag dhan SEK 65 milyan oo karoon guud ahaan oo ka baxday khasnadda Hay’adda Caymiska Bulshada ee Försäkringskassa, balse waxay hakanaysaa dhamaadka sanadkan.
Previous article”Waa wax iskuma falayaal anshax daran!” – Erdogan oo ka hadlay kartuunkii laga sameeyey
Next articleTOOS u daawo: FC Krasnodar vs Chelsea, Basaksehir vs PSG – LIVE (Shaxda Sugan)